गोजीमा पैसा नबोक्नुस्, बाआमालाई पनि सकेसम्म नोट नदिनुस् | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
गोजीमा पैसा नबोक्नुस्, बाआमालाई पनि सकेसम्म नोट नदिनुस्
असोज १३, २०७६ सोमबार १२:५५:५ | लेखनाथ भुसाल
दशैँमा बजार चलायमान हुन्छ । सबैको हातहातमा पैसा हुन्छ । बैंकमा पनि बचत गर्ने कम र पैसा झिक्ने धेरै हुन्छन् । हर्ष र उमंग साट्ने चाड भएकाले पनि पैसा खर्च हुनु स्वभाविक नै हो । तर दशैँमा पैसा खर्च गर्दा चनाखो हुनुपर्छ । एउटा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भने अर्को खर्च नियन्त्रण गर्न जान्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले नयाँ नोटको कुरा गरौं । अहिले धमाधम नयाँ नोट सटहीको काम भैरहेको छ । अरु बैंकले जस्तै नेपाल बैंकले पनि आफ्ना विभिन्न शाखाबाट नयाँ नोट साट्ने काम गरिरहेको छ । नयाँ नोट साट्ने बेला आफूलाई जति आवश्यक हो, त्यति मात्र साटौँ ।
अहिले एकजनाले ५, १०, २०, ५० र १०० को एकएक बण्डल गरेर जम्मा १८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म साट्न पाइन्छ । तर आफूलाई त्यति चाहिँदैन भने सबै साट्नु पनि पर्दैन । थोरै साट्दा हुन्छ । पैसा लगेपछि ब्याज आउँदैन । अनावश्यक खर्च हुन सक्छ ।
साट्ने क्रममा सुरक्षामा ध्यान दिऔं । बैंकमा पैसा साटिसकेपछि झोलामा सुरक्षित राखौं । गाडीमा हिँड्दा या पैदल जाँदा सजक हुनुपर्छ । यस्तो बेला चोरी पनि हुन सक्ने भएकाले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
त्यसो त नयाँ नोट मात्र होइन, बजारमा किनमेल गर्न जाँदा पनि पैसाको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । गोजीमा टन्न पैसा बोकेर जाँदा चोरी हुने, हराउने डर हुन्छ । त्यसैले ठूला सपिङ सेन्टरमा किनमेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने खल्तीमा पैसा नबोक्नुहोस् । सपिङ सेन्टरमा कार्ड या अरु प्रविधिमार्फत पैसा तिर्न सकिन्छ ।
हिजोआज धेरै बैंक प्रविधिमैत्री भैसकेका छन् । गोजीमा पैसा नबोकेर जाँदा पनि हुन्छ । क्यूआर कोर्ड भन्ने छ । स्क्यान टू पे भन्ने छ । कनेक्ट आइपीएस भन्ने सुविधाहरु छ । भिसा डेबिट कार्ड छ । ठूला व्यापारिक केन्द्रमा यिनै सुविधा प्रयोग गरेर पैसा दिन सकिन्छ । कार्डबाटै हुन्छ ।
गोजीमा पैसा नबोक्दा धेरै फाइदा हुन्छ । एउटा हराउने डर हुँदैन । अर्को गोजीमा पैसा नभएपछि धेरै खर्च हुने डर पनि हुँदैन । सबैलाई थाहा छ कि गोजीमा पैसा भएपछि जे देखे पनि किनौं किनौं लाग्छ । तर कार्ड या अरु प्रविधिबाट तिर्ने भएपछि आवश्यक ठाउँमा मात्र खर्च हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरौं । यस्ता प्रविधिमार्फत भुक्तानी गर्न नसकिने ठाउँको लागि मात्र गोजीमा पैसा बोकौं । तर धेरै नबोकौं । आवश्यक मात्र बोकौं ।
घरमा बाआमा, दिदी दाइ या अरु सदस्यलाई पैसा दिनु छ भने पनि नोट नै दिनु पर्दैन । अहिले त सबैको आआफ्नो बैंक खाता हुन्छ । उहाँहरुको बैंक खातामै पैसा जम्मा गरौं । अनि भनाैँ, तपाईँको खातामा मैले यति पैसा राखिदिएको छु भनेर । त्यसमाथि आफ्नो खातामा पैसा कति जम्मा भयो भनेर धेरैको मोबाइलमा एसएमएस पनि आउँछ ।
हुन त नोट नहुँदासम्म दिनेलाई पनि चित्त बुझ्दैन, लिनेलाई पनि चित्त बुझ्दैन । तर यो बानी सुधार्नुपर्छ ।
मेरो आग्रह के हो भने सकेसम्म नोट बोकेर नहिँडौं । आवश्यक पर्दा मात्र बोकौं । बैंकहरुका प्रविधिबारे थाहा पाउँ । प्रविधिको धेरै प्रयोग गरौं । खर्चभन्दा बचतमा ध्यान दिउँ । अझ युवाहरुलाई बचतमा ध्यान दिन मेरो विशेष आग्रह छ । अहिले बचत गर्दा भविष्य सुरक्षित हुन्छ ।
दशैँमा बैंकबाट पैसा झिक्ने मात्र हुँदैनन्, बचत गर्न आउनेहरु पनि धेरै हुन्छन् । यो बेला कर्मचारीको दशैँ बोनस आउने भएकाले उनीहरुले जम्मा गर्छन् । व्यापारी, व्यवसायीले पनि बचत गर्छन् । तुलनात्मक रुपमा कर्मचारीले बढी खर्च र व्यवसायीले बढी बचत गर्छन् ।
खर्चभन्दा बचतमा ध्यान दिनुपर्छ । बजारमा अहिले मूल्यवृद्धि छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर तपाईंको गोजीमा कति पैसा छ, कति खर्च गर्ने भनेर तपाईँले निर्णय र नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।
खर्च कम गरौँ, बचत गरौँ । बचत भनेको पनि खर्च नै हो । खर्च रोकियो भने भोलि अप्ठ्यारो पर्दा सजिलो हुन्छ ।
बचत गर्ने बेला बैंकका अफर र योजनाबारे जानकारी लिने गरौं । बैंकका विभिन्न निक्षेप योजना हुन्छन् । युवा बचत, महिला उद्यमी, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विशेष बचत खातामा ब्याजदर पनि बढी हुन्छ । बैंक छान्दा बैंकको अवस्था र ब्याजदर तथा सुविधा हेर्नुपर्छ । तर सुरक्षामा पहिले ध्यान दिनुपर्छ ।
(नेपाल बैंक लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक लेखनाथ भुसालसँग मिलन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
अन्तिम अपडेट: बैशाख ७, २०७७
भुसाल नेपाल बैंक लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।
धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.८ म्याग्निच्युडकाे भूकम्प
जेठ १७, २०७७ शनिबार
सीमा नाका असार १६ गतेसम्म बन्द, कडाइ गर्न थप प्रहरी परिचालन ग...
संविधान संशाेधनकाे पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसकाे प्रस्ताव
लकडाउन जेठ ३२ सम्म लम्बियो, अन्तर्राष्ट्रिय उडान असार १३ सम्म बन्द
कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउँदै काठमाण्डाै महानगरपालिका
बाजुराको क्वरेण्टीनमा शिशुकाे जन्म
दाङ : ४ हजार बढी क्वरेण्टीनमा, १ हजार ५४१ जनाकाे स्वाब सङ्कलन
शनिबार विशेष : मान्छेमा कोरोनासँगै खेतीमा सलहको डर !
नेपालमा काेराेनाकाे कारण ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या ७ पुग्याे
लिपुलेक विवाद समाधान गर्न दुवै देश वार्तामा बस्नुपर्छ : भारती...
करोडौँको झुन्डमा उड्ने सलह किरा भारतमा विध्वंश मच्चाउँदै, नेप...
जी–७ सम्मेलनकाे लागि जर्मन चान्सलर अमेरिका नजाने
त्रिभुवन विमानस्थलमा अब १५ वटा जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने
काठमाण्डाै महानगरले चिकित्सक सङ्घलाई दियो १ हजार थान ज्याकेट
‘लकडाउन अवधिलाई शून्य अवधिको मान्यता’
तपाईँको प्रदेश र पालिकाले कति बजेट पायो ? (सूचीसहित)
काेराेना सङ्क्रमणकाे 'अर्काे झट्का'काे लागि तयार रहाैँ : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय, १० दिनपछि स्वदेश फिर्तीकाे काम सुरु हुने
‘दुई फड्को अघि बढ्न एक फड्को पछि सरेर बजेट ल्याएको छु’
जेठ १६, २०७७ शुक्रबार
वैदेशिक रोजगार, कोरोना र अबको बाटो
न्याय र सुरक्षाको ‘होम डेलिभरी’ हुन आवश्यक छ
जेठ १५, २०७७ बिहिबार
परदेशमा कोरोना जितेका नवराज भन्नुहुन्छ : बिरामी हुँ भनेर कह...
जेठ ११, २०७७ आइतबार
परदेशीले सोध्छन् : रोगलेभन्दा भोकले मरिन्छ जस्तो छ, दिदी प्लेन ...
जेठ ९, २०७७ शुक्रबार